Fikradaha Meheraddaadu Ku Iibiso Instagram Instagram ➡️ Kuwa Raaca ▷ ➡️
Fikradaha ganacsigaaga si ay ugu iibiyaan Instagram
December 21, 2018 0 comments 1352
Siyaabaha aad u isticmaali karto barta Instagram si aad u iibiso
Kordhinta kanaalkaaga Instagram loogu talagalay iibka tooska ah Waxay kuu horseedi doontaa abaalmarino waaweyn.
Shaygan ayaa dabooli doona sida loo isticmaalo Instagram ganacsigaaga ee suuqgeynta iibka tooska ah. Ujeedada maqaalkani waa in la badalo Koontada Instagram fursad daqli.
Adigoo iska indho tiraya aasaaska suuqgeynta Instagram, waxaad u oggolaaneysaa inuu tartanku guuleysto.
El Suuq-geynta Instagram Kordhinta boggaaga internetka iyo tirada booqashooyinka bil kasta. Haa, Instagram waa mid awood badan leh!
Marka xigta, waxaan ku siinayaa figradaha ugu fiican ganacsigaaga si aad ugu iibiso Instagram.
U sheeg dadka waxa la sameeyo
Waxba ma kobcin doonaan ganacsigaaga si ka dhakhso badan sidii aad ugu sheegi lahayd dhagaystayaashaada waxa aad rabto inay sameeyaan. Tani waa wicitaan waxqabad. Way shaqeysaa, waa waqti la tijaabiyay waana run. Adduunyada xawaaraha ku socda ee warbaahinta bulshada, waa inaad tustaa dhagaystayaashaada sida aad uga caawin karto iyaga. Markaa waxaad isla markiiba u sheegtaa halka ay aadayaan caawimadaas. Xaqiiqdii, dhagaystayaashaadu way qadarin doonaan taatikada "tooska ah ee barta".
Laga soo bilaabo khibradeena gacanteena koowaad, Instagram waa idaacad gaar u ah warbaahinta bulshada ee arrintan la xiriirta. Qofka caadiga ah ee ku jira barta Instagram ayaa arki doona muuqaal, hubin doona sharaxaadda oo raacaya wicitaanka ficilka. Fudud sidaas. Guul Iibka Instagram waa inaad wacdaa ficilka "Guji xiriirka kujira astaanta macluumaadka wixii macluumaad dheeraad ah."
Laga soo bilaabo waayo-aragnimo, marka wicitaanka ficilku ka horreeyo dalabkan cajiibka ah, waxaad helaysaa macaamiil badan oo suurtagal ah.
Waxay u egtahay cajiib, sax? Waa hagaag qiyaas waxa? Way shaqeynaysaa
Waxaa jira habab badan oo lagu soo jiito dhagaystayaashaada. Waxay ku bilaabmaysaa gelitaanka sawirada saxda ah iyo wicitaanada si wax looga qabto halkaas. Tani waxay keenaysaa caarada # 2.
Aqoonso doorbida dhagaystayaashaada
Sawirada rafcaan u ah doorbidka macaamiisha ayaa ah tillaabada ugu muhiimsan ee lagu meeraysto ganacsiga Instagram-ka.
Helitaanka, higsashada iyo ku-habboonaanta dhageystayaashaada waa qodobka ugu muhiimsan. Iyo haddii aad ka hesho dakhliga ugu sarreeya madalkan.
Aqoonsiga doorbidka dhagaystayaashaada ayaa ah arin aad u weyn. Waxaan arkay waxa dhaca markay milkiileyaasha ganacsigu u daabacaan waxyaabaha khaldan ee dhagaystayaasha la doonayo. Aynu dhahno ma qurux badna!
Nasiib wanaagse, waxaad ku aqrinaysaa tan faham qaar ka mid ah dookha dhageystayaashaada. Marka tani waa inay fududahay. Dib u milicso bartaada 'Instagram' oo fiiri qoraalada caanka ah. Maxaa helay faallooyinka, saamiyada iyo waxyaabaha la midka ah? Dhagaystayaashaadu waxay lahaan doonaan dhadhan iyo dookh isku mid ah sida adiga oo kale. Ku billow qoraal kasta oo 'Instagram' ah su'aasha ah "Miyay sawirkani xiisaynayaa xiisaha?" "Ma iibsan lahayd tan?" Hadday jawaabtaadu haa tahay, markaa waxaad ka heshay waxyaabo kooban.
Tixgeli sidoo kale inaad aado bogagga tartamaya adiga. Fiiri fariimahooda caanka ah iyo sawirradooda. Markaad hesho sawirada dhagaystayaashaada wacan ay la falgalaan, u samee sawirro la mid ah boggaaga.
Mar alla markii aad dhigto doorbidaada dhagaystayaashaada, waa waqtigii aad ugu gudbi laheyd caarada # 3.
3 Aqoonso meelaha faa'iidada laga helo
Fursadahaaga monetika ee Instagram-ka waa ay xaddidan yihiin markaad metelayso a empresa ee iibka tooska ah. Shirkadaha iibinta tooska ah badankood ma u oggolaadaan kuwa iyaga ku xiran inay ka baxaan goobta xayeysiinta. Aqriso qoraalka wanaagsan oo ku saabsan xubinnimadaada. Waxaa jira waxyaabo badan oo suurtagal ah oo ah in xayeysiiska lacag la siinta aan la oggolaan
Marka maxay tahay inaad sameyso?
Ma xasuusataa caarada # 1? U yeeritaanka ficil? Xaaladda aad ku xiran tahay waxay u baahan tahay inaad isticmaasho wicitaan xoog leh ficil si aad u hesho meel faa iido laga helo.
Laakiin sug. Ha ku dhejin xiriiriyahaaga xiriirka meeshan, abuuro hadiyad dhiirrigelin xiiso leh. Hadafkaagu waa inaad bulshada u soo qaadatid waxa ku jira. Waxaad dhejin kartaa xiriirinkan lacag la’aan on Instagram iyo shabakad bulsheed kasta. Xiriiriyahaani wuxuu ururin doonaa fursadaha emaylka ee dadka raba inay helaan macluumaad dheeri ah.
Waa maxay nuxurka? Nuxurku waa macluumaad ay dhagaystayaashaada qaaliga ahi doonayaan. Haddii aad meteleyso warshadaha qurxiyo, ka dibna laga yaabee hadiyad bilaash ah oo ku saabsan sida loo buuxiyo waa ikhtiyaar wanaagsan. Haddii aad meteleyso warshadaha caafimaadka iyo fayoobaanta, markaa cuntada sida dufanka yar way u shaqeyn karaan.
Ujeedada meeleynta shaqaalahan ayaa ah in la qaato dhagaystayaashaada 'Instagram' oo loogu beddelo hoggaanno. U yeer wicitaan ficil ah "Guji xiriirinta bogga" sharraxaadda. Halkani waa meesha faa'iidadaadu ku taal. Markaa waxaad ka guureysaa goobta faa'iidada waxaad u guureysaa masrax iib ah. Akhriso tilmaamaha # 4.
4: Waxbar, Sii Noocyo iyo Kucelcelis
Ka dib marka aad dhagaystayaashaada geeyso goobta dakhliga, waxaad u baahan tahay qorshe hawleed. Qaado fiilooyinka rabay freebie-gaaga oo u rogi a iibinta alaabada.
Waxaan soo jeedineynaa qaab loo adeegsado seddex astaamood oo kala duwan.
Ka bilow waxbarashada.
Hogaamiyaha raba freebie-gaagu waa "helitaan hadiyadeed oo bilaash ah." Ilaa aad ka sii waddo inaad naftaada wax u barto wax soo saarkaaga qiimaha leh, weligood ma iibsan doonaan.
Sii macluumaadka ay u baahan yihiin oo ay bilaabaan dhisitaanka kalsooni.
Sii noocyo kala duwan tilmaamahaaga.
Cunsurka muhiimka ah ee mideynta hoggaanka iibinta wuxuu leeyahay taxane tillaabooyin badan oo dabagal ah oo meesha yaal. Abuur qorshe suuq geyn ah oo ka kooban suuq geynta emaylka, qiimo dhimis, iyo qiimeyn “sida loo” sawirada. Ka fikir faafitaanka macluumaadka iyaga ku baraya farsamo cusub alaabtaada. Kala duwanaanta sidoo kale macnaheedu waa casumaadaha websaydhka ama dhacdooyinka kale ee tooska ah ee aad adigu martigeliso. Tani waa fure u guuritaankooda iib ah, waxa u shaqeeya dadka qaar uma shaqeyn doono kuwa kale. Waa inay lahaataa noocyo ku filan qabashada iibka shakhsiyaad badan oo kala duwan.
Bini-aadamku waxay u baahan yihiin inay maqlaan isla fariin iskucelcelis ah oo ah 12 jeer ka hor intaysan shaqo bilaabin. Waxaad dareemi kartaa daal marka aad ku celiso macluumaadkaaga ku saabsan badeecadaada marar badan. La fahmi karo Laakiin waa inaad ogaataa in macaamiishaadu aysan dhageysanin markii ugu horeysay. Maysan ku maqal markii labaad, saddexaad ama afaraad!
Ha ku khaldamin inaad ka fikirto in sawirkaaga “kahor iyo kadib” sawirkaaga Instagram uu ku siin doono iib. Ujeedada Suuqgeynta 'Instagram' waxay u eegtahay jawiga iibka. Halkaan waxaa ah inaad kula hadasho mar kale iyo mar kale. Haddii dhagaystayaashaadu maqlaan iibka ayaa bilaabay markii ugu horeysay, waxay lahaan lahaayeen kumanaan iib ah.
Maadaama taasi aysan aheyn kiiska, markaa waxaad u badan tahay inaadan maqal codkooda. Ka soo qaad kanaalka shabakadaha bulshada oo leh wicitaan ficil. Iyaga ku hagaaji 'goobta faa'iidada'. Daahfuri olole suuqgeyn isbeddel ah oo la hadal marar badan.
Falanqaynta 5 iyo Kordhinta
Ugu dambayntiina, falanqaynta iyo tayaynta ayaa qayb muhiim ah ka ah adiga Istaraatiijiyad Instagram. Waxaa jira laba farsamooyin falanqeyn oo kaladuwan oo ay tahay inaad fahamto. Tirobarasho (cabir) iyo Tayo (cabir la'aan).
Halkani waa meesha aad ku qiyaasi karto ka go'naanta sawir kasta / daabacan. Abuur (ama isticmaal arji falanqayn) halka aad ku xisaabin karto is dhexgalka qoraal kasta.
Cabbirka aad rabto wuxuu noqon doonaa tirada dhajinta ee xiriirintaada ku jirta astaanta.
Waxaad ubaahnaan doontaa inaad cabirto inta badhamadaas ay noqdeen a macmiil macquul ah (waxay u direen email). Cabbirka cabiraadda ah wuxuu ku tusayaa suurtagalnimada dakhliga. Marka mid kasta oo ka mid ah rajooyinkaani uu raaco ololahooda suuqgeynta (caatada # 4) waxay leedahay meel wanaagsan oo laga bilaabo.
Hadafkaagu waa inaad si wax ku ool ah u hirgasho Ololaha Instagram. Marka xogta badan ee aad ku dari karto falanqeyntan, ayaa sida ugu dhaqsaha badan ay u noqoneyso.
Maalinta / waqtiga maalinta la daabacay
Nooca mawduuca - xiriiriye, sawir, fiidiyoow, iwm.
Saadaalin ku dhajinta xiriirinta xargaha hogaaminta.
U adeegso istiraatiijiyaddan si aad u dhisto muuqaal ay dadaalladoodu faa’iido u yihiin oo waqti lumiya.
Falanqaynta tayada ayaa ah in la eego dhinacyada suuq geyntaaga oo aan tiro ahaan aheyn. Falanqayntaada tayada ayaa ka hadlaysa suugaanta ganacsigaaga. Waa kuwan su'aalaha qaarkood si aad u bilowdo.
Miyaan bixiyaa macluumaad ku filan? Nuxurkeygu ma taageeraa dadaalkeyga (siinta dadka wicitaan ku filan wax qabad)?
Xiriirkeyga bilaashka ah sifiican ma ugu shaqeeyaa barxada Instagram?
Marka la i siiyo wax kasta oo aan ka aqaan suuqgeynta, miyaan isu arkaa "spammer"?
Miyaan siiyaa qiimo run ah dhagaystahayga bartilmaameedka ah?
Cabbirradan tayada leh waa inay noqdaan kuwa tixgalinta ugu muhiimsan ah. Ma waxaad siisaa feejignaan ku filan adeegga aad fidiso mise waxaad si fudud isku dayaysaa inaad kasbato lacag? Rumayso. Dadku way yaqaaniin farqiga u dhexeeya qofka wax iibinaya iyo qof qiimo ku hogaamiya.
Dariiqa kaliya ee lagu iibin karo waa in uu noqdaa hogaamiyaha qiimeeya marka ugu horeysa falanqeynta tayada. Kolba qiimaha aad siiso, ayaa ah guusha guusha ee aad la kulanto.
Hawshani waa mid dheer.
Waxaad ku dareemi kartaa amaan aamin ah inaad si dardar leh u kobciso badeecadahaaga iibka tooska ah ee shabakadaha bulshada. Mar labaad, na aamin. Waqti u samee inaad naftaada wakiil ugu noqoto hogaamiyaha qiimaha leh waxaadna heli doontaa guulo muddo dheer ah.
Waad aqrisay talooyinka 5 si aad ugu dajiso ganacsiga iibka tooska ah adoo adeegsanaya barta Instagram.
Aqoonso doorbidka dhagaystayaashaada
Aqoonso goobta waxtarka
Waxbarida, kala duwanaanta iyo ku celcelinta.
Falanqaynta iyo tayeynta.
Raac tillaabooyinkan oo si fiican ayaad uga sare mari doontaa tartankaaga warshadaha. Iibka tooska ahi waa mid faa iido ku leh shabakadaha bulshada. Laakiin marka hore waa inaad caddeysaa inaad waxtar u leedahay dhagaystayaashaada.
Hadda waad ogtahay waxa kumanaan kun oo qof weligood aan fahmi doonin! Ficil u samee maanta, waad ku mahadsan tahay inaad sameysay.
Waxaan kaa caawinaynaa inaad adeegsato Falanqaynta Instagram.
1 Siyaabaha aad u isticmaali karto barta Instagram si aad u iibiso
2 Fikradaha ganacsigaaga si ay ugu iibiyaan Instagram
2.1 U sheeg dadka waxa la sameeyo
2.1.1 Aqoonso doorbida dhagaystayaashaada
2.2 3 Aqoonso meelaha faa'iidada laga helo
2.3 4: Waxbar, Sii Noocyo iyo Kucelcelis
2.3.1 Ka bilow waxbarashada.
2.3.2 Sii noocyo kala duwan tilmaamahaaga.
2.3.3 Ku celi
2.4 Falanqaynta 5 iyo Kordhinta
Sababaha ay dadka qaarkiis u leeyihiin taageerayaal badan Instagram-ka
Talooyin ku saabsan suuqgeynta Instagram